ရထားဖြင့် Strasbourg ရန်ခရီးသွားလာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားဖြင့် Strasbourg ရန်ခရီးသွားလာ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 17/03/2020)
တစ်ခရီးသွားပြင်သစ်သို့သွားရောက်ခြင်းဖျောပွထားလိုက်တဲ့အခါ, လူအများစုချက်ချင်းလို ပဲရစ်၏ထင်. သို့သျောလညျး, ပြင်သစ်မြို့တော် ဤလှပသောနိုင်ငံတွင်လာရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်တစ်ခုတည်းသောမြို့မဟုတျပါဘူး, Strasbourg ဖို့ခရီးသွားလာသစ်ကို IN ဖြစ်ပါသည်. များစွာသောအခြားသောအရပ်တို့ကိုမ လူအပေါင်းတို့သည်များအတွက်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်၏အဖြစ်ကိုခံထိုက်သောသူများမှာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြင်ကွင်းများ နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုသူတို့ပူဇော်နိုင်ပါတယ်.
Strasbourg သူတို့၏အမျိုးအတစ်ခုဖြစ်သည် မြို့ကြီးများ ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးတန်ဖိုးထားနိုင်, နှစ်ဦးစလုံးသည်၎င်း၏လှပမှုရှိလုပ်ဖို့ဥစ္စာကြွယ်ဝဘို့. အဓိကဥရောပမြို့မြို့တို့မှ Strasbourg မှရထားဖြင့်ခရီးသွားလာကွာသင့်ရဲ့အသက်ရှုယူသွားဖို့ရှိပါတယ်. သင်သည်ဤမှသွားလာလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြပါစို့ စိတ်ကူး destination သို့ နှင့်သင်သည်အဘယ်အရာကိုမြင်အဲဒီမှာလုပျနိုငျ:
Strasbourg လည်ပတ်စေရန်အဆိုပါ Strasbourg ဘုရားရှိခိုးကျောင်းခရီးသွားတဲ့အခါမှာ
အလယ်ခေတ်ကာလကနေဘုရားရှိခိုးကျောင်း enchanting နေကြတယ်, လေ့လာစူးစမ်းဖို့ကွောကျရှံ့ဖှယျနှင့်ရိုးရှင်းစွာအံ့ဘွယ်သော. နှင့် Strasbourg ဘုရားကျောင်းမှာ သူတို့တွင်အရပ်ရှည်ရှည်ရပ်တည် - စာသား, ဒါဟာသည်အထိကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦဖြစ်ဖို့အသုံးပြုအဖြစ် 1874! ထိုသို့တချို့ကအစိတ်အပိုင်းများနေ့စွဲအဖြစ်ဝေးကျောအဖြစ် 1100, ဒီသမိုင်းဝင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာရပ်နေခဲ့ပြီးမည်မျှရှည်လျားမှစစ်မှန်သောသေတမ်းစာအရာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအတွင်းပိုင်းကိုစူးစမ်းခြင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာစာစောင့်ကြည့်ဖို့ကပ်ဖို့ရှေးခယျြဖွစျစေ, သငျသညျအထင်ကြီးခံရဖို့တာပေါ့.
, La တုတ်ခိုင်ပြင်သစ်၏ရုပ်ပုံများကိုယူ
, La တုတ်ခိုင်ပြင်သစ်သို့နင်းနီးပါးအချိန်ပြန်မသွားနဲ့တူခံစားရ. quaint အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဝက် timbered အဆောက်အဦများအားလုံးအမြိုးမြိုးကုန်သည်ပိုင်ဖို့အသုံးပြုသောခရိုင်အတွင်းရှိ stacked နှင့်အတူ, cobblestone လမ်းများ, နှင့်ရိုးရာ စားသောက်ဆိုင်, သင်တွေ့ကြုံခံစားရန်ရှိသည်နေရာတစ်နေရာရဲ့. ဓာတ်ပုံရိုက်သည် နှင့်ကြိမ်ရှည်လျားသောအတိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကူး.
မာဆေး Strasbourg မှရထား
လိုင်ယွန် Strasbourg မှရထား
အဘို့ အစားအစာကိုခရီးသွားဧည့်, တစ်ဦးရှိပါတယ် အထူး gastronomic အားရစရာ Strasbourg မှနယ်လှည့်လာသောအခါနမူနာခံရဖို့: Alsatian အစားအစာ, နှင့်ခြွင်းချက် ဝိုင် နှင့် ဘီယာ. Strasbourg အဆိုပါ Alsace ဒေသစိုးစံ, ဝိုင်အများအားဖြင့် varietal များမှာဘယ်မှာ, နှင့်ကြိုးစားရန်အဓိကနှစ်ခုGewürtztraminerနှင့် Riesling များမှာ. ဒယ်အိုး-ကြော်ငါးကြင်းသို့မဟုတ် Choucroute garnie နှင့်အတူအဆုံးစွန်သောတွဲ, လူသိများတဲ့ Alsatian ဂန္, နှင့်သင့်အာခေါင်၌မွေ့လျော်.
Cologne Strasbourg မှရထား
လိုင်လီ Strasbourg မှရထား
ဇူးရစ် Strasbourg မှရထား
Metz Strasbourg မှရထား
Strasbourg ရှာဖွေစူးစမ်း၏နောက်ထပ်မြတ်သောလမ်းတစ်လှေစီးကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာတစ်ချိန်တည်းမှာမြို့တော်ရဲ့အလှဆုံးမြင်ကွင်းအချို့ကိုထုတ်စစ်ဆေးနှင့်၎င်း၏သမိုင်းတွေအကြောင်းသင်ယူဖို့လှပသောအခွင့်အလမ်းဖွင့်. ရှိပါတယ် လှေစီးရွေးချယ်စရာများများ ကနေရှေးခယျြဖို့, သင်တို့အားအဖြစ်စိတ်ကူးများ၏စုံတွဲတစ်တွဲရစေခြင်းငှါ, အရာဟော့စပေါ့ လာမယ့်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်.
Strasbourg ဒုတိယအကြီးဆုံးရှိပါတယ် မီးရထားဘူတာရုံ ပြင်သစ်မှာ, ပဲရစ်ပြီးနောက်ညာဘက်. မီးရထားဖြင့်ရောက်ရှိအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သင်ယူ၏ option ရှိသည် မြန်နှုန်းမြင့်ရထား TGV (မီးရထားမြန်နှုန်း။) ကိုယ်ကသာအတွက်ပဲရစ်ကနေ Strasbourg ရန်သင့်အားယူနိုင်ခဲ့2နာရီနှင့် 20 မိနစ်များ, အစားပုံမှန်၏4ကားဖြင့်နာရီ.
ဒါကလည်းအခြားအဓိကဥရောပမြို့မြို့တို့မှခရီးသွားကြိမ်မှာလည်းသိသိသာသာတိုတောင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ်. သင့်ထံမှ Strasbourg မှခရီးသွားနေပါလျှင် ဆွစ်ဇာလန်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, နယ်သာလန်, ဂျာမနီ, နှင့်အခြားဥရောပနိုင်ငံများနှင့်မြို့ကြီးများ, သင်အလွယ်တကူနဲ့အလျင်အမြန် Strasbourg မှရနိုင်. ကိုလိုက်ရှာနေသည် ညဥ့်ဆက်သွယ်မှု သင်တစ်ဦးပေါ်မှာဆိုရင်လျှင် တင်းကျပ်တဲ့ဘတ်ဂျက် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့အားလက်မှတ်တွေများသောအားဖြင့်စျေးသက်သာရှိပါတယ်.
Strasbourg ၏ချစ်စရာကောင်းမြို့ရှာဖွေစူးစမ်းသင်၏အသက်တာ၏အချိန်ရှိသည်ဖို့အဆင်သင့်? သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ ယခု, နှင့်ခရီးနှင့်ဦးတည်ရာနှစ်ဦးစလုံးပျော်မွေ့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-strasbourg-train%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#alsace #sncf europetravel strasbourg tgv trainjourney Tranride ရထားခရီးသွား travelfrance